Xeelad fudud oo lagu abuuro qoto dheer Sawirka iyada oo aan loo baahnayn 3D | Abuurista khadka tooska ah
Si loo abuuro qoto dheer Sawirka oo loo siiyo dabeecad faahfaahsan oo la yaab leh mashruuc kasta oo garaaf ah, waxaa jira xeelad yar. Iskusoo wada duuboo, haddii aan dooneyno inaan siino kakanaansho dheeri ah waxyaabaha la isku qurxiyo ama xariiqyada halkii aan ka heli lahayn tirooyinka ugu muhiimsan ee halabuurka, ku ciyaarista nalalka iyo hoosku way naga caawin kartaa. Tan awgeed, muhiim maahan in loo adeegsado 3D, waxaan ku sameyn karnaa nuqul fudud oo dheji.
Marka, tusaale ahaan, haddii aan leenahay halabuur sida warqadda hoose, laakiin aan dooneyno in qurxinta gudaha aysan sidaas u siman, waxaan ku abuuri karnaa si qoto dheer Sawirka, innaga oo aan adeegsan barnaamij kale.
Si tan loo sameeyo, waa inaad nuqul ka sameysatid oo aad ku dhejisid istaroog aan dooneyno inaad ka wada shaqeyno isla goobta labo jeer (Xakameyn ama Amar + C iyo ka dib Xakameyn ama Amar + F). Marka xigta waa inaad doorataa mid ka mid ah nuqulada ka hooseeya asalka sida ay u kala horeeyaan oo aad waxyar ugu dhaqaajisaa jihada aad rabto inaad ku iftiimiso nalalka iyo hooska
Kadib, nuqul la xushay, waa inaad midabkiisa u beddelaysaa mid fudud. Hadday tahay qaab aad u adag, waxaa fiican inaadTafatir / Tafatir midabada / Sawirka sawirada) oo xulo midabka la rabo.
Kadibna waxaan ku celcelinaynaa howsha laakiin waxaan u wareejineynaa koobiga hoose jihada ka soo horjeedka kii hore oo waxaan u badaleynaa midabkiisa mid madow
Saameyntani waxay noqon kartaa mid aad u liidata haddii tirada la soo guuriyey ay tahay mid aan caadi ahayn ama si dhow loo eego. Sidaa darteed, si aad tan u jilciso, waxyar ayaad iskaga yareyn kartaa cidhifyada nuqullada jaban ee asalka ah. Si tan loo sameeyo, waxaan ku dalban karnaa mid yar oo Gausiyaan ah mid kasta (Saamaynta / Dareemida / Gaussiiska Gawaarida). Saameyntan ku jirta sawirka waa mid aad u xaddidan sidaa darteed waxaa fiican in had iyo jeer la siiyo radius aad u yar.
Gabagabadii, laga arkay masaafo ku filan, saameyntan waa inay awoodaa inay abuurto qoto dheer Sawirka sida aan raadineynay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Trick si aad u abuurto qoto dheer Sawirka